विनोद चौधरीको आत्मकथा अब पाठकले अङ्ग्रेजीमा पनि पढ्न पाउने भएका छन् । दुई बर्ष अघि नेपाली भाषामा प्रकाशित उनको आत्मकथा बेस्ट सेलिङ नेपाली पुस्तकहरुको सुचीमा पर्छ । अङ्ग..
तलको लिस्ट, नेपाली भाषामा लेखिएका पुस्तकहरु मात्रको तुलना गरी तयार पारिएका हुन् । यस सामग्री तयार पार्दा, अरु भाषाबाट अनुवाद गरिएका पुस्तक समावेश गरिएका छ्रैनन् । समालो..
अमर न्यौपाने, पानीको घाम कथासंग्रहले चर्चामा आए । उनको यो संग्रहले २०६६ सालमा पद्मश्री पुरस्कार पायो । त्यसपछि उनले बाल बिधुवामा आधारित उपन्यास –सेतो धरती लेखे । सेतो ध..
बुद्धिसागर, अकबरे खुर्सानीको फ्यान । कर्णाली ब्लुज उपन्यास लेखेर, चर्चामा आएका बुद्धिसागर खुर्सानी नभए, भागै बस्दैनन् । उनी खानामा पीरो रुचाउँछन् । अकबरे खुर्सानी उनलाई..
काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर । नाकाबन्दीले निम्त्याएको अभाव । भुकम्प पीडितको बिचल्ली । जनता अभाव र पीडाको दैनिकी गुजार्दैछन् । सरकार भने, मन्त्रीमण्डल विस्तारमा..
संबिधान समावेशी नभएको भन्दै मधेसी दलले, थालेको आन्दोलन चौथो महिनामा छ । भारतले गरेको नाकाबन्दीले देश अस्तब्यस्त छ । ग्याँस नपाउनु, पेट्रोल, डिजेल, खाद्यान्न, औषधी नपाउनु सामान्य बनिसकेको छ । कालाबजारी ह्वात्तै बढेको छ । जनताका गुनासा बढेको बढ्यै छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता गुनासाहरु पोखिएका छन् । आज हामीले, यीनै बिषयमा साह..
कसो बाटो भुलेर म, फेरी यहाँ भट्टी छेउ आईपुगेँ ? अब सिधा वा बाङ्गोगरी जसो जस्तोगरी भएर यहाँ आईपुगेपछि, नआउनुथ्यो आईसकेर भित्र आईसकेपछि साल्दीज्यु एक ट्वाक चढाउँ की ? अस्ति, पोरै देखिन् छोडुम् त भनेको, खोई परार पनि त्यसै भनियो र रक्सीको बदनाम मात्तै गरियो। त्यो साल त मलाई पनि खुवै लाज भाथ्यो र त […]
मानीसका रुची अनेक क्षेत्रमा हुन सक्छन् । कसैलाई पढ्न मन लाग्छ, कसैलाई खेल्न त कतिपयलाई लेख्न । तर, आफ्नो रुचीको क्षेत्रमा क्रियाशिल रहनका लागि सहि सुझावको अभाव भने धेरैले महसुस गरिरहेका हुन्छन् । सरल र उत्कृष्ट लेखनशैली भएका एकजना बहु चर्चित लेखक बुद्धिसागरले लेखनमा रुची भएकाहरुलाई केहि सुझाव दिएका छन् । बुद्धि सागरको कर्णाली ब्..
नेपाली हाँस्यब्यङ्ग्य क्षेत्रमा परिचित नाम हो शैलेन्द्र सिम्खडा । परिस्थिती अनुसारका कविता तथा ब्ङ्ग्यात्मक प्रस्तुतीद्धारा दर्शकलाई मनोरञ्जन दिन माहिर सिम्खडाको पछिल्लो समय बिभिन्न स्टेज कार्यक्रमहरुमा माग हुदैँ आईरहेको छ । उनले लेखेका कवितामा बिभिन्न राजनितीक तथा सामाजिक परिस्थीती माथिको ब्ङ्ग्य पाईन्छ । देशप्रेम, राष्ट्रप्रेम..
यो हाम्रो बुद्धको धर्ती, यो हाम्रो शिवको भूमि जन्मेथे बाल्मिकी, ब्यास, यहीं सारा ऋषि मुनि सीताको माइती यै हो, भृकुटी यहिँ जन्मिइन् यो पुण्यभूमि कैल्यै नि थिएन कान्तिले बिहिन् तपले जपले तन्त्र मन्त्रले मुग्ध यो थियो संस्कृति, सभ्यता, शान्ति, ज्ञानले युक्त यो थियो पाटी,पौवा र मन्दिर, अद्वितीय कला थिए हिमाल वारीपारि नै चर्चाका शृंख..